Aqoonkaab Isticmaalka Barnaamika Whatsapp oo laga Joojinayo moobilo badan !! | Aqoonkaab
Isticmaalka Barnaamika Whatsapp oo laga Joojinayo moobilo badan !!
Feb 29, 2016Technology
Whatsapp waxa uu joojin doonaa in laga isticmaalo mobilo dhowra oo ay ka mid yihiin moobilkii caanka ahaa ee BLACKBERRY 10 iyo Nokia Symbian S60 iyo windows phone 7.1 .
shirkadda whatsapp waxa ay sheegtey inay diirada saarayso hormarinta moobilada casriga ah ee hadda dunidan aad looga isticmaalo .
shirkadda ay leedahay facebook ee whatsapp hadda waxa isticmaala Hal (1) bilyan oo isticmaale dunida oo dhan waxa uu joojin doona in laga isticmaalo barnaamjikisa mobilada kor ku xusan bisha 12 aad ee sanadkan 2016.
moobilada uu whatsapp khadka ka saarayo waa moobilo aan in badan la cusboonaysiin (UPDATE ) isla markaana aan ku shaqayn nidaamyada cusub ee hadda dunida aad looga isticmaalo .
laakiin whatsapp waxa uu ku shaqayn doona moobilka Blackberry noociisa oo dambeeya ee ku shaqeeya nidaamka loo yaqaan Android .
moobilka blackberry waxa uu ku guul darraystey inuu la tartamo mobilada casriga ee smartphones haddana waxa laga isticmaala 1 % dunida oo dhan
waa kuwan liiska dhamaan moobilada laga joojin doono isticmaalka whatsapp
markii la bilaabay adeega whatsapp sanad kii 2009 waxa dunida xoog u haystay moobilada Blackberry iyo Nokia kuwaas oo isticmaalkooda dunida ka ahaa 70 % .
laakiin hadda moobilada ku shaqeeya nidaamyada ay soo saaraan shirkadaha MICROSOFT, GOOGLE, APPLE
ayaa dunidan aad looga isticmaala , isticmaalkooduna waxa uu u dhigmaa 99.5 % , waana sababta keentay in whatsapp uu doorbido inuu diirada saaro moobilada ku shaqeeya nidaamyada ay soo saaraan shirkadahani .
Previous PostHal abuurnimada mobilada smarphoneska oo hoos u dhac ku yimi Next PostDhalatayee Maxaad La Dhiman ??